ကာရံဆူး ၏ စုံစီနဖာ အပိုင်းအစများ...: HAPPY BIRTHDAY!!!!
Posted by ကာရံဆူး at 9:37 AM
အဟဲ.... အိပ်ယာထထချင်းးးးး တွေ့လိုက်ရတဲ့ မွေးနေ့ပွဲအတွက် ဝမ်းသာ၏။
မကာရံ သက်ဆိုင်သူကြီး မွေးနေ့အတွက် အခုလို အပင်ပန်းခံပြီး တကူးတက ရှာဖွေ ဂူးဂဲအဲလေ... တကူးတက ချက်ပြုတ်စီမံထားလို့ ရှယ်သုံးဆောင်ရ၏။
ဝိုင်ကြိုက်သည်။ ကြက်ဆင် သုံးထပ်သား အကျွတ်ကြော်၊ ဘဲမကြိုက်စ်....ကျောက်ပုစွန်မကြိုက်စ်... ငါးမကြိုက်..... ရေခဲမုန့်ကို အဝစားကာ ပါဆယ်ထုတ်သွားသည်။ ခစ်ခစ်.... ရေလည်း မသောက်ချင်ပဲ သောက်လိုက်ရသည်။
အစားပဲ စိတ်ထဲရောက်နေတာနဲ့ ဆုတောင်းပေးဖို့မေ့ သွားတယ်။
မကာရံ သက်ဆိုင်သူကြီး ဟက်ပီဘတ်ဒေးပါ... ဒီမွေးနေ့မှစလို့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ချစ်သူဖက်တီးလေးနဲ့လည်း အသက်ထက်ဆုံး ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်းနိုင်ပါစေ။ အကို့ကို အကြံပေးချင်တာ တစ်ခုကတော့.... အနိုင်ကျင့်မခံရအောင် အစားများများစားပေးပါ.. မဟုတ်ရင် ဗလအားကိုးဖြင့် အနိုင်ကျင့်ခံရကိန်းမြင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခင်မင်မှုဖြင် မွေးနေ့အမှတ်တရ... ညီမတော် သမီးကြီးမှ အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်း ပြုလိုက်ရပါသည်။ ခစ်ခစ်
အခု... အမှန်အကန်မစားရတော့ သိပ်မကျေနပ်သေးးးး တနင်္ဂနွေလာရင် သက်ဆိုင်သူကြီးကို ခေါ်လာခဲ့ပါလေ..... အဲ့ကျမှ အဝစားပစ်မည်.... အခုလည်း ဝတော့ဝပါသည်...
ဗိုက်မဟုတ်... မျက်လုံး.... (တကယ်စားလို့မရပဲ မျက်စိနဲ့ပဲ ကြည့်ငမ်းသွားရတာကိုးးးးးး):P
happy birthday ပါသက်ဆိုင်သူကြီးရေ..
ဘယ်သူမှန်းမသိရတဲ့ သက်ဆိုင်သူကြီးအတွက် Happy Birthday လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
သက်ဆိုင်သူကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်သူလေးတို့ လိုရာန္ဒအားလုံး ပြည့်ဝပါစေ
ချစ်သက်တမ်း ရာကျော် ခိုင်မြဲပါစေနော်..
အဟမ်းးး အဟမ်းးးး ဒေါ်ကာရံ ဖွလိုက်ရမလား ပြော ပြော ဟွင်းးး ဟွင်းးး ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ ဘလော့ဂ်ပေါ်တင်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမယ် ထင်သလဲ ဟဲဟဲ
ကြောက်ပါနဲ့အေ ဟီးးး များတို့က တကယ်လုပ်ပါဘူး
ကဲကဲ သက်ဆိုင်သူကြီးရေ မင်လာပါ အဲလေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်
ဟက်ဟက် အပေါ်က မချောတို့ အားကျနေတယ်ထင်တယ် မချောရေ အတင်စီးမခံနဲ့ ဘာတဲ့ မင်လာပွဲ ဆိုပြီးဘလော့ဂ်ပေါ်တင်လိုက်ဇမ်းးးးဘာာာာ အေ ခိခိ
မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးသွားကြတဲ့ သမီးကြီး ၊ ညီမခိုင်နုငယ် ၊အစ်မခင်ဦးမေ၊မချော နဲ့ညီမလေးဝက်ကလေး အားလုံးကို ကာရံက ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်နော်...
၊ အပြန်လှန်နားလည်မှုနဲ့ ချစ်ခြင်းအဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပါစေသော်
မကာရံရေ... နောက်ကျသွားလို့ စောတီး စောတီး
မကာရံရဲ့ သက်ဆိုင်သူကြီးရေ... သက်ဆိုင်ရာတွေပါသိအောင်ပြောပါရစေ...
HaPpY bIrTHdAY ! ! ! :) :-)
မကာရံနဲ့အတူ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ကျော်လွန်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာ...
သိတယ်ဟုတ် လူကြမ်းကြီးဆိုတာ... :) :) :)
(ဒီ..... ဏီလင်းညို ထပ်ဆိုးပြန်၏။)
ကျော်နှင်းဆီလွင် ၊ လူကြမ်းကြီး နှင့် ဏီလင်းညိုတို့ ကိုလဲ ထပ်လောင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါရှင့်...
СР-50-73ФВ 88г без упак
Разъем на плату 6-6 (тип 8) (TJ8-6P6C)
Разъем RST20i5 96.052.6051.4
Соединитель GST18i3K1BS 25H 40WS
Коннектор для соединения WP светодиодных лент 10mm2pin с проводом 14см 7дн
Разъем /0.5mm/ 24pins
AMP 5-082634-0 разъем
СР50-815ФВ СОЕДИНИТЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ. 1990-2010 ГОДА.
АП1 П269 полумуфта разъем 91
СР75-154ПВ(5) группа Разъемы ---10941
Соединитель кабеля (5043) 5060
Разъем GST18i3S B1 R V SW (92.031.8758.1) Розетка в панель (винт) защелка
Разъем рп14-30 розетка (карб., щелев.)
TNC-коннектор на RG-59 вкручив. (TNC-7410B) (GT-211B)
ကာရံဆူးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုစိတ်ဝင်းစားမိလို့ဝင်လည်လိုက်တာ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားသွားတယ် ဘဲကင်ရယ် ဂဏန်းသိပ်ကြိုက်လို့ လင့်လေးပါချိပ်ထားလိုက်တယ်နော်